Travel World: September 2014
Re: မြန်မာ့ခရီးသွား ညွှန်းကိန်းများနှင့် ဖြစ်စဉ် အကျဉ်း
I only have some instance of old photos all that you mentioned. I sent them to the press. Then I will share it to everybody.
2014-09-30 18:32 GMT+06:30 Aye Min Oo <sonnyamo@gmail.com>:
Have you got Tourist Burma Bus/ Palmphlet/ Signboard/ memorabilia/ anything?
On 9/30/14, Tomme Aung <tommeaung@gmail.com> wrote:
> *မြန်မာ့ခရီးသွား ညွှန်းကိန်းများနှင့် ဖြစ်စဉ် အကျဉ်း*
> ဖွင့်ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်
> ခရီးသွားလာရေး ကဏ္ဍ ထဲ ခေတ်နဲ့အညီ မျောပါစီးနေရပေပြီ။
> ဖွင့်ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ အားသာချက်ရှိသော နိုင်ငံများ အလျင်အမြန်
> အားသာချက်ဆိုသည် နိုင်ငံ၏ ကုံလုံကြွယ်ဝလှပသော တောတောင်ရေမြေ နှင့်
> သမိုင်းအမွေအနှစ်များ ရိုးရာဓလေ့ အစဉ်အလာ များ အခိုင်အမာ တည်ရှိနေခြင်းတို့ကို
> ထိုအချက်များဖြင့် tourism ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်လျင်
> တိုင်းပြည်၏ အဓိက ဝင်ငွေ တိုးပွားစေကာ တိုင်းပြည် ဖွင့်ဖြိုးမှု ကို
> အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ခရီးသွားအဖွဲ့ကြီး UNWTO ကဆိုသည်။
> မြန်မာနိုင်ငံသည် လူဦးရေ သန်းတစ်ထောင်ကျော်စီရှိကြသည့် တရုပ် နှင့် အိန္ဒယ
> ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ခရီးသွား UNWTOအဖွဲ့ဝင် နှင့် PATA , BIMSTEC
> အပြင် မဲခေါင် ဒေသ နိုင်ငံများ ၏ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။ ဒါသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ
> ခရီးသွား ကဏ္ဍ အတွက် အားသာချက်ဖြစ်စေသည်။
> ၁။ မြန်မာ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေး မတိုင်မီခေတ် နှင့်( PRE PERIOD OF MOHT)
> ၂။ မြန်မာ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ဖြစ်ပေါ်ပြီး ခေတ် (POST PERIOD OF MOHT) ဟူ၍
> အချိန် အပိုင်းအခြား ကာလ ကြီးနှစ်ခုကို တွေ့ရပါသည်။
> တစ်ချို့သော UNWTA နှင့် BIMSTEC ခရီးသွားမှတ်တမ်း များတွင်မြန်မာ့ ခရီးသွား
> သမိုင်းတွင်အချိန်ကာလ သုံးခု ရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
> (REF: BIMSTEC 2005 PRESS)
> ၄င်း မှတ်တမ်းများတွင် ၁၉၄၈ မှ ၆၂ ခုနှစ် အထိကို တစ်ချိန် ၁၉၆၂ မှ ၈၈ ခုနှစ်
> အထိ နှင့် ၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၃ အထိ စုစု ပေါင်း ခရီးသွားကာလ သုံးခု ဟုဖော်ပြပါသည်။
> သို့သော် စာရေးသူအနေဖြင့် ၁၉၉၃ မှ ယနေ့စာရေးသည့် နှစ် ၂၀၁၄ ကာလကို လေးခုမြောက်
> ကာလ အဖြစ် ဖြည့်စွက်ရေးသားချင်ပါသည်။
> ပထမ ကာလတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ချို့ထူထောင်ခဲ့ကြပြီး ပိုင်ရှင်များမှာ
> များသောအားဖြင့်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဓနရှင်ကြီးများ နှင့် တစ်ခြားစီးပွားရေး
> ထင်သလောက် ခရီးသွား မများခဲ့ကြောင်းကို သုတေသန မှတ်တမ်းများအရ သိနိုင်ပါသည်။
> ဒုတိယ ကာလတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အများစု ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ
> ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံအဖြစ် ထားပြီး The Burma Economic
> Development Corporation (BEDC) က ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် TOURIST BURMA ကို
> စီမံခန့်ခွဲ လုပ်ဆောင်စေခဲ့သည်။ နောင်တွင် MTT ဟုတွင်ခဲ့သည်။ Tourist
> Information Service( TIS) စားဖျော် နှင့် ဟိုတယ် အဖွဲ့ ။ A Tourism branch of
> Union of Burma Airway (UBA) တို့သည် ၄င်း ဒုတိယ ကာလ တွင်းရှိ ခရီးသွားဆိုင်ရာ
> ထိုအချိန်တွင် တိုးရစ် ဗီဇာမှာ တစ်လဖြစ်သည်။
> တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်အပြီး ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်းမှ ၁၉၈၈ အထိကို
> ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ မှာ ၂၄ နာရီဖြစ်သည်။
> ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ လျှော့ချခဲ့သည်။
> ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ကုန်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနများထဲက ဌာနခွဲ နံပါတ် ၂၀
> အဖြစ် TOURIST BURMA အမည်ဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို
> လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပြန်သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်
> မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရှိသမျှသောဟိုတယ်များကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းပြီး
> အစိုးရဝန်ထမ်းများဖြင့် လည်ပတ်စေခဲ့သည်။ TIS နှင့် BAC တို့ ပြန်လည်
> ယခု ဒုတိယ ကာလတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ငန်းပြ သာသာ ရှိခဲ့ရသည်။
> အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နိုင်ငံတွင်း ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများ နှင့် နိုင်ငံ၏
> သဘာဝ အလှတရားများကို နိုင်ငံတကာ၏ ဖုံးလွှမ်းဖျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရန်ဆိုသည့်
> ခရီးသွားမူ ၀ါဒကြောင့် ထင်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
> ပြည်ဝင့်ခွင့်ဗီဇာမှာ သုံးရက် ထိုမှတစ်ဆင့် ခုနှစ်ရက် အစရှိသဖြင့်
> ၁၉၉၀ တွင် SLORC မှ ပထမဦးဆုံး TOURISM LAW ကိုပြဌာန်းပေးပြီး နောက် နှစ်နှစ်
> အကြာ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်မှ MINISTRY OF HOTELS AND TOURISM ကို
> စတင် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။
> ၁၉၈၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဈေးကွက်စနှစ် အပြောင်းအလဲ ကြားတွင် MOHT အနေဖြင့်
> လည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာရခြင်းဖြစ်သည်။ FDI နိုင်ငံတကာ
> ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးသည့် အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
> ၁၉၉၂ ကုန် ၁၉၉၃ မှ ၂၀၁၄ ခနှစ်ကို စတုထ္ထ ခရီးသွားကာလဟုဆိုရမလိုပင်။
> ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အစပျိုးလုပ်ကိုင်လာကြသည်။
> အောင်မြင်မှု အနည်းငယ်ရလာကြပါသည်။
> ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ပထမဦး VISIT MYANMARS YEARS 1996 ကို ပြုလုပ်ချိန်တွင်
> နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာနိုင်ငံကို လာလည်ကြသည်။ တစ်ဖြည်းဖြည်း
> VISA က နှစ်ပတ်ဗီဇာ ကျော်လာသည်။ ၁၉၉၈ တွင်မှာတော့ ယခုနေ့ ဗီဇာ ဖြစ်လာမည့် ၂၈
> ရက်ဗီဇာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ စီးပွားရေးအရလာသူ အတွက် ရက် ၇၀
> ဆိုင်ရာ ဓါတ်ပုံများ ယခင်ကတင်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
> လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
You received this message because you are subscribed toatopic in the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/travelmyanmar/s472xmm7i0M/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CA%2BR1VvG4_Ag6j8OB_p9fv9Biz-8F6wOBOsfDK61N%3Ddt2Mgq7OA%40mail.gmail.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAKXCEDONPtYo%2B95h_FVP66yeuHC7svvyeJc3sHrywS8nZSidJg%40mail.gmail.com.
Posted by Travel at 10:30 PM0comments
2nd. time announcement :
limited seated : 45 participant , need to enroll to MTGA office 01
256278 till 1st. Oct. 12 noon.
Another round of information sharing session on child protection,
orphanage tourism and commercial sexual exploitation of children for
the tourist guides who couldn't make it last time by UNICEF.
Tourist guides' commitment and enthusiasm to collaborate in this area
of child protection were appreciated very much by UNICEF
Details of next session is as follow:
Place: UNICEF (JPG Meeting Room)
No. 23-A, Inya Myaing Road (if you are coming from
Dhammazedi Road, it's in the same street as Mingalar Garden Hotel and
the office lane is next to Mingon Tawya monastery. )
Shwe Taung Gyar Ward (2)/ Bahan Township
Language: in Myanmar
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CADtnhKMPwT1PenM6QGqhQ_f75ZwChZLGXvb_0EUg6Lg_46TGEw%40mail.gmail.com.
Posted by Travel at 7:22 PM0comments
SDN Network Engineer at Irving, TX ( GC & USC only Accepted )
Job Title: SDN Network Engineer
NOTE: GC & USC only Accepted
ROLE: SDN Network Engineer
- Deliver network (function) virtualization / SDN solutions as part of our network.
- Deliver detailed designs of network (function) virtualization / SDN (OpenFlow, OpenStack...) to software engineers, hardware engineers and validation engineers.
- Implement architectural design with business use cases, trade-offs, and risk mitigation included.
- Provide technical presentations and documentation to influence other stakeholders within and outside of our company.
- Potentially take partial responsibilities in project management and team coordination
- Masters or PhD in Computer Science and Electrical Engineering withafocus on communication networks is desired.
- Background in networking with focus on IP technologies (including network (function) virtualization / SDN) is required.
- Strong understanding of SDN Applications, SDN Controllers (e.g. OpenDaylight), and SDN Data Plane.
- Strong understanding of OS (Linux), Hypervisors (KVM, Xen etc).
- Strong understanding of OF (Open Flow), OF Config, Open vSwitch, OVSDB, NETCONF
- Strong understanding of Open Stack (Neutron, Nova etc)
- Strong understanding of legacy routing protocols (OSPF, IS-IS, BGP etc) and related data plane architectures.
- Excellent programming skills (C/C++/JAVA)
- Excellent communications skills with the ability to work with other engineering teams
- Ability to work independently on complex tasks
- Strong motivation in driving leading edge technologies
.NET C# Angular JS -- Addison, TX (Local) -- 6+ months Contract
Job Title : .NET C# Angular JS
Location : Addison, TX (Local)
Interview Details: Phone & F2F
Our client's development team is seekingapassionate, value driven programmer to add to the existing engineering team. This team is developing applications usingastandard Microsoft .NET C# stack and AngularJS along withanumber of third party libraries and open source software.
Data warehouse/ MetaData repository experienceastrong plus
.NET 3/.5/4.0 with WCF, WWF, WPF, and Silverlight
Experience with distributed architectures and design patterns strongly preferred8 or more years of commercial software development experience
or more years of experience developing server based compute engines, distributed services, or reusable components
4-year college degree in Computer Science oraclosely related field, or demonstrable work experience
Citrix Engineer -- Addison, TX (Local)-- 4-6 months Contract
Job Title : Citrix Engineer – 6.5
Duration : 4-6 months Contract
3+ Years Citrix experience
Citrix and Microsoft Certification
Knowledge of Citrix 6.5 Enterprise Edition on 2008 R2
Knowledge of Citrix Access Gateway Enterprise Edition
Knowledge of VMWare ESXi 5.1
Knowledge of Citrix Provisioning Services 6.1
Intermediate Citrix support experience with large scale deployments (1000+ subscribers)
Intermediate knowledge of Windows Server operating systems and network administration.
Intermediate knowledge of Citrix Presentation Server Technologies.
Citrix XML Broker
Farm Data Store
Citrix Printing Methodologies
Citrix Zone architecture and failover design
Intermediate knowledge of Microsoft Remote Desktop Technologies.
Windows Remote Desktop2008 or greater
Windows Remote Desktop-specific Active Directory Group Policy Objects
Windows Roaming and Local Profiles
Someone who is local to either MN or CA -- Java Developer
Posted by Travel at 7:03 AM0comments
Los Angels -CA
SAP HR_IL_3+ months
Please find the below job requirement and let me know if you have any consultants available with you... Thank you.
Tittle: SAP HR
Looking for 8 years candidate and excellent communication skills..
Posted by Travel at 5:39 AM0comments
Posted by Travel at 5:02 AM0comments
Unsure why you received this message? You previously subscribed to digests from this group, but we haven't been sending them forawhile. We fixed that, but if you don't want to get these messages, send an email to rec.travel.australia+nz+unsubscribe@googlegroups.com.
Herbal incense,smoking blends aromas potpourri available - 1 Update
Herbal incense,smoking blends aromas potpourri available
billysteven <billysteven.e6f91b8@travelbanter.com>: Sep 29 08:01PM +0100
Herbal incense,smoking blends aromas potpourri for sale
Herbal incense smoking blends aromas potpourri for sale,We have blends
like voodoo smoking blends,super kush,rocket fuel and more more others ...more
A hidden Brick Monastery in Amarapura called Shwe Ku Gyi, unfolded Architecture that was used to be
ကဲ မန်းလေးနယ်အနီးက လူသိပ်မသိသေးတဲ့ ရှေးဟောင်း အုတ်ကျောင်းကြီး။
ပန်းတမော့ လက်ရာများနှင့် အုတ်ရိုးနံရံ ကို သစ်တိုင်နဲ့ အပေါ်ထပ် ကို တည်ပြီး အသား
ဒိုင်း မြား ယက်မကို ထောက်ပြီး အသား မိုး ထားခဲ့ဟန်မှာ မူလအစ လက်ရာဖြစ်သည်။ ၅၃၆ နာရပတိစည်သူ ဆောက်ခဲ့သော ပုဂံခေတ် လက်ရာ ကျောင်းကြီးဟု ကျောက်စာတွင်တွေ့ရသည်။ အမည်မှာ ရွှေကူုကြီးကျောင်းဖြစ်သည်။ အမရပူရ နန်းတွင်းအနီးတွင်ရှိပါသည်။
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/048bb6a7-0768-4d8d-9765-c0ab91fc4859%40googlegroups.com.
Posted by Travel at 3:44 AM0comments
မြန်မာ့ခရီးသွား ညွှန်းကိန်းများနှင့် ဖြစ်စဉ် အကျဉ်း
ဖွင့်ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခရီးသွားလာရေး ကဏ္ဍ ထဲ ခေတ်နဲ့အညီ မျောပါစီးနေရပေပြီ။
ဖွင့်ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ အားသာချက်ရှိသော နိုင်ငံများ အလျင်အမြန် တိုးတက်လာစေနိုင်သည်။
အားသာချက်ဆိုသည် နိုင်ငံ၏ ကုံလုံကြွယ်ဝလှပသော တောတောင်ရေမြေ နှင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်များ ရိုးရာဓလေ့ အစဉ်အလာ များ အခိုင်အမာ တည်ရှိနေခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။
ထိုအချက်များဖြင့် tourism ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်လျင် တိုင်းပြည်၏ အဓိက ဝင်ငွေ တိုးပွားစေကာ တိုင်းပြည် ဖွင့်ဖြိုးမှု ကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ခရီးသွားအဖွဲ့ကြီး UNWTO ကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် လူဦးရေ သန်းတစ်ထောင်ကျော်စီရှိကြသည့် တရုပ် နှင့် အိန္ဒယ နှစ်နိုင်ငံအကြားတည်ရှိမှုသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ရန်နောက်ထပ်အားသာချက်ပင်
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ခရီးသွား UNWTOအဖွဲ့ဝင် နှင့် PATA , BIMSTEC အပြင် မဲခေါင် ဒေသ နိုင်ငံများ ၏ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။ ဒါသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရီးသွား ကဏ္ဍ အတွက် အားသာချက်ဖြစ်စေသည်။
၁။ မြန်မာ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေး မတိုင်မီခေတ် နှင့်( PRE PERIOD OF MOHT)
၂။ မြန်မာ့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ဖြစ်ပေါ်ပြီး ခေတ် (POST PERIOD OF MOHT) ဟူ၍ အချိန် အပိုင်းအခြား ကာလ ကြီးနှစ်ခုကို တွေ့ရပါသည်။
တစ်ချို့သော UNWTA နှင့် BIMSTEC ခရီးသွားမှတ်တမ်း များတွင်မြန်မာ့ ခရီးသွား သမိုင်းတွင်အချိန်ကာလ သုံးခု ရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
(REF: BIMSTEC 2005 PRESS)
၄င်း မှတ်တမ်းများတွင် ၁၉၄၈ မှ ၆၂ ခုနှစ် အထိကို တစ်ချိန် ၁၉၆၂ မှ ၈၈ ခုနှစ် အထိ နှင့် ၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၃ အထိ စုစု ပေါင်း ခရီးသွားကာလ သုံးခု ဟုဖော်ပြပါသည်။ သို့သော် စာရေးသူအနေဖြင့် ၁၉၉၃ မှ ယနေ့စာရေးသည့် နှစ် ၂၀၁၄ ကာလကို လေးခုမြောက် ကာလ အဖြစ် ဖြည့်စွက်ရေးသားချင်ပါသည်။
ပထမ ကာလတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ချို့ထူထောင်ခဲ့ကြပြီး ပိုင်ရှင်များမှာ များသောအားဖြင့်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဓနရှင်ကြီးများ နှင့် တစ်ခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများသာဖြစ်ကြသည်။
ထင်သလောက် ခရီးသွား မများခဲ့ကြောင်းကို သုတေသန မှတ်တမ်းများအရ သိနိုင်ပါသည်။
ဒုတိယ ကာလတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အများစု ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံအဖြစ် ထားပြီး The Burma Economic Development Corporation (BEDC) က ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် TOURIST BURMA ကို စီမံခန့်ခွဲ လုပ်ဆောင်စေခဲ့သည်။ နောင်တွင် MTT ဟုတွင်ခဲ့သည်။ Tourist Information Service( TIS) စားဖျော် နှင့် ဟိုတယ် အဖွဲ့ ။ A Tourism branch of Union of Burma Airway (UBA) တို့သည် ၄င်း ဒုတိယ ကာလ တွင်းရှိ ခရီးသွားဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် တိုးရစ် ဗီဇာမှာ တစ်လဖြစ်သည်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်အပြီး ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်းမှ ၁၉၈၈ အထိကို ဒုတိယခရီးသွားကာလဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ မှာ ၂၄ နာရီဖြစ်သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ လျှော့ချခဲ့သည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ကုန်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနများထဲက ဌာနခွဲ နံပါတ် ၂၀ အဖြစ် TOURIST BURMA အမည်ဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပြန်သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရှိသမျှသောဟိုတယ်များကို ပြည်သူပိုင် သိမ်းပြီး အစိုးရဝန်ထမ်းများဖြင့် လည်ပတ်စေခဲ့သည်။ TIS နှင့် BAC တို့ ပြန်လည် သက်ဝင်လာပြန်သည်။
ယခု ဒုတိယ ကာလတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ငန်းပြ သာသာ ရှိခဲ့ရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နိုင်ငံတွင်း ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများ နှင့် နိုင်ငံ၏ သဘာဝ အလှတရားများကို နိုင်ငံတကာ၏ ဖုံးလွှမ်းဖျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရန်ဆိုသည့် ခရီးသွားမူ ၀ါဒကြောင့် ထင်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်ဝင့်ခွင့်ဗီဇာမှာ သုံးရက် ထိုမှတစ်ဆင့် ခုနှစ်ရက် အစရှိသဖြင့် တိုးပေးခဲ့သည်။
၁၉၉၀ တွင် SLORC မှ ပထမဦးဆုံး TOURISM LAW ကိုပြဌာန်းပေးပြီး နောက် နှစ်နှစ် အကြာ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်မှ MINISTRY OF HOTELS AND TOURISM ကို စတင် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဈေးကွက်စနှစ် အပြောင်းအလဲ ကြားတွင် MOHT အနေဖြင့် လည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာရခြင်းဖြစ်သည်။ FDI နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးသည့် အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
၁၉၉၂ ကုန် ၁၉၉၃ မှ ၂၀၁၄ ခနှစ်ကို စတုထ္ထ ခရီးသွားကာလဟုဆိုရမလိုပင်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အစပျိုးလုပ်ကိုင်လာကြသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ပထမဦး VISIT MYANMARS YEARS 1996 ကို ပြုလုပ်ချိန်တွင် နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာနိုင်ငံကို လာလည်ကြသည်။ တစ်ဖြည်းဖြည်း သတိမူလာမိကြသည်။
VISA က နှစ်ပတ်ဗီဇာ ကျော်လာသည်။ ၁၉၉၈ တွင်မှာတော့ ယခုနေ့ ဗီဇာ ဖြစ်လာမည့် ၂၈ ရက်ဗီဇာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ စီးပွားရေးအရလာသူ အတွက် ရက် ၇၀ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဆိုင်ရာ ဓါတ်ပုံများ ယခင်ကတင်ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/0e4f25a0-fe26-4338-9218-0374c8d8e459%40googlegroups.com.
Posted by Travel at 3:23 AM0comments
SAP Fresher, looking for SAP jobs after your training?
Dear SAP Freshers,
If you are out in the market looking for SAP jobs after your training, then this isamust attend webinar from our Project Manager. The following are some items that will be covered on this webinar and they are free to attend for you and your friends. Here is from our Project Manager to get the best knowledge.
- What exactly will your role be inaSAP Implementation project inalittle detail
- Importance of understanding SAP Implementation projects to efficiently tackle SAP Interviews
- and of course more and Q & A at the end of the session
Posted by Travel at 3:14 AM0comments
Posted by Travel at 3:12 AM0comments
Java Developer || Minneapolis, MN || Local only
We are looking for Java Developer for one of our client at Minneapolis, MN. Please let me know your interest.
In Person Interview. Must be local only
·         Experience with Oracle NoSql
·         Develop with angular JS
·         Restful Services
·         Automation Testing - Protractor & Selenium & Cucumber
·         5-7 years of experience asaDeveloper
Note: We respect your Online Privacy. This is not an unsolicited mail. Under Bills.1618 Title III passed by the 105th U.S. Congress this mail cannot be considered Spam as long as we include Contact information andamethod to be removed from our mailing list. If you are not interested in receiving our e-mails then please reply witha"REMOVE" in the subject line at support@i-tecsol.com and mention all the e-mail addresses to be removed with any e-mail addresses, which might be diverting the e-mails to you. We are sorry for the inconvenience.
Posted by Travel at 3:00 PM0comments